Dhageyso: Doofaarka Dalka Uganda iyo Dadka Soomaalida ah Yaa Qaalisan?
Thursday September 22, 2016 - 11:42:09 in Wararka by Super Admin
Ciidamada shisheeye ayaa marar kala duwan xasuuqyo ka geystay dalka soomaaliya kaasi oo illaa iyo iminka ay wadaan mana jirto cid ficilkooda ka hor timid marka laga soo tago Xarakada Al Shabaab oo dagaal kula jirta.
Ciidamada soo duulayaasha Afrikaanta ayaa Xasuuq daran ku haya Shacabka Soomaaliyeed
Dhiigga soomaalidu wuxuu noqday mid rakhiis ah laakiin waxaa qaali ah dhiigga Doofaarka Uganda iyo Kenya oo ay ciidamadoodu ka mid yihiin kuwa soomaaliya ku soo duulay waxaana ciddii Doofaar disha lala tiigsanayaa maxkamad ciqaab adagna way mutaysanaysaa!.
Suldaan Cabdiraxmaan Mahdi Jimcaale oo ka mid ah indheer garadka soomaaliyeed ayaa wareysi ay la yeelatay idaacadda islaaamiga ah Alfurqaan waxa uu kaga sheekeeyay meesha foosha xun ee soomaalidu maanta taal loona baahan yahay in ay dhaqse uga hil hilato.
Wuxuu soomaalida ku dhiiri geliyay in ay dagaalo jihaad ah la gasho shsiheeyaha kusoo duulay alkooda ee gumaadka ku haya.
Dhawaan ayay ahayd markii ciidamada Burundi dad reer miyi ah ku xasuuqeen ceelka waayo arag oo hoos taga degmada afgooye ee gobalka shabealaha hoose halkaasi oo lix ruux ay ku dileen 8 kale oo ay nolosha ku wateena laba ruux ayay meel dhexe ku dileen waxaana meydadkooda laga helay isbitaal Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Halkan ka degso Wareysiga Suldaan Cabdi Raxmaan MP3
Dalka Hindiya oo kaalinta Sedaxaad ka galay wadamada ugu dhimashada badan Carona Virus.
Al Qaacidda oo Askar Faransiis ah ku dishay Waqooyiga dalka Maali.